လေဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတိ (သုိ့) အောင်ကျူးနှင့် နှစ်တစ်ထောင်အမြုတေလေပုတ်ထုတ်ဆေး – အပိုင်း (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » လေဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတိ (သုိ့) အောင်ကျူးနှင့် နှစ်တစ်ထောင်အမြုတေလေပုတ်ထုတ်ဆေး – အပိုင်း (၂)	25
လေဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတိ (သုိ့) အောင်ကျူးနှင့် နှစ်တစ်ထောင်အမြုတေလေပုတ်ထုတ်ဆေး – အပိုင်း (၂)
Posted by ဇီဇီ on Mar 12, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Entertainment, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 25 comments
မဖတ်ခင် သိချင်တာကို အရင်မေးမိသည်။
“ခင်များ ခုန က မေးပြီးတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
ကြာလှပြီဖြစ်သော စာရွက်ပေါ်က စာလုံးတွေက မသဲမကွဲ။
ကြောင်နိုင်ဓါး နှင့် ကြောင်တန်းစားပျက် တစ်ဆယ့်ရှစ်ကွက်
“” ယိစ် “”
“”ယ ယ ယားးး””
“‘” အာဝုစ် …… မိညောင် “” ဟူသော မာန်သွင်းသံတို့ လှိုင်လှိုင်ထနေသည် ။
နေရာကားးး အနောက်ရိုးမ၏ နက်ရှိုင်းလှသောလှိုင်ဂူကြီးအတွင်းမှဖြစ်သည် ။
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက် ကိုယ်တုံးလုံးဖြင့် လေသိုင်းကျင့်နေလျှက်ရှိသည် ။
မာန်သွင်း၍ အတွင်းအားထုတ်လိုက်တိုင်း ပါးစပ်မှ အခိုးအငွေ့များတလှိုင်လှိုင်ထွက်နေသည်မှာ ဂေါဇီလာကြီး မီးမှုတ်နေသကဲ့သို့ပင် ………
ထိုသူမှာ “ကြောင်ဏှာသီး ဟု ခေါ်တွင်သော အောင်ကြူး” ဖြစ်မည်ကို အထူးပြောဖွယ်မရှိတော့လေပြီတည်း ။
အခိုးအငွေ့များနှင့်အတူ အနံ့ဆိုးများလည်း ထောင်းထောင်းထနေသည် ။
အလို …… ဘယ်သို့ဖြစ်ပါအံ့ ???
ဖြစ်ရပ်မှန်မှာ နှစ်တစ်ထောင်ကြာပန်းအမှတ်ဖြင့် အလောသုံးဆယ်ခိုးယူပြီး ဆေးတစ်ထုတ်လုံးက်ိုလောဘတကြီးစားမိခဲ့သည် ။
စားလိုက်မိသောဆေးမှာ “နှစ်တစ်ထောင်လေပုတ်ထုတ်ဆေး” ဖြစ်သဖြင့် ဆေးစားမှားသော အောင်ကြူးမှာ လေပုတ်များအောက်သို့မဆင်းဘဲ အထက်သို့ဆန်နေသည်ကို စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်လေသည်တမုံ့ ………
သို့သော် အတွင်းအားတို့သည်ကား အဆမတန်တိုးလာသည်ဖြစ်၍ နှစ်ခြောက်ဆယ်လေ့ကျင့်မှရသော ပမာဏနှင့်ညီလေသည် ။
“” အီးးယားးးးးးးး အွတ် “””
မာန်သွင်းသံအဆုံး လက်ဝါးအစုံကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရာတွင် ………
“” ဝုန်းး “””
တဖက်ကျောက်သားနံရံမှာပြိုပျက်သွားပြီးလျှင် အခန်းငယ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာသည်ကို အံ့သြဖွယ်တွေ့လိုက်ရလေတော့သည် ။
အောင်ကြူးမှာ မျက်လုံးအပြူးသားဖြင့် မှင်တက်ငေးမောနေလေ၏ ။
ထို့နောက် အခန်းငယ်ထဲသို့ ဖြေးညှင်းစွာဝင်ရောက်ပြီးလျှင် မျက်စိကစားလိုက်ပြီး အလွန်ဝမ်းသာသောအမူအယာများဖြစ်ပေါ်လာလေတော့သည် ။
“” ဟေးးး အောင်ဘီကွ အောင်ဘီ ငါကွကြောင်ဏှာသီးးး ဟေးးဟေးးး “”
အောင်ကြူးတွေ့လိုက်သောအရာမှာ အခန်းအလယ်ရှိ ကျောက်သားစားပွဲတစ်ခုပေါ်မှ ဓါးတစ်လက်နှင့်အတူ ဆိတ်သားရေပြားတစ်ချပ်ဖြစ်လေသည် ။
ဆိတ်သားရေပြားပေါ်တွင် အောက်ပါ စာသားအားရှေးဟောင်း ဟီးဘရူးစာလုံးများဖြင့်ရေးသားထားသည်ကို အံသြစွာမြင်ရပေလိမ့်မည် ။
## ကြောင်နိုင်သည့်ဓါး ၊
မုချ ရောက်မည်မှတ် … ##
ထို့နောက် ဓါးအိမ်တွင်ထွင်းထုထားသောစာများက်ိုဤသို့ဆက်လက်တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည် ။
## ကြောင်တန်းစားပျက် တစ်ဆယ့်ရှစ်ကွက်သိုင်းကျမ်း ##
ထိုနေ့မှစ၍ အောင်ကြူးမှာ သေလည်ကြောင်ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသော ဂိုဏ်း၏ရတနာဓါးနှင့်သိုင်းကျမ်းကို ရရှိသွားလေတော့သည် ။
ကြောင်ကိုအနုမြူဗုံး တပ်ဆင်ပေးလိုက်သည့်နှယ် ဖြစ်လေတော့မည်ကို အွန်သိုင်းလောကသားများ သိရှိနိုင်ဦးမည်မဟုတ်ပေ ။
“” ဟားး ဟား ဟားးး တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ဂဇက်ကျေးရွာရယ်…
နင်တို့အားလုံးကို ကြောင်လေလည်သံ သောသောညံ သိုင်းကွက်နဲ့ ဖြိုခွင်းပစ်လိုက်မယ် ……
ငါကွ ကြောင်ဏှာသီးး “””
ကြောင်မိစ္ဆာ လော နှူးဘာလော
ညသန်းကောင်အချိန်တိုင်းတွင် အောက်သိုးသိုးလေပုတ်နံ့ကြီးရပြီးနောက် မိန်းမပျိုလေးများ၏အိမ်နားတဝိုက်တွင် အရိပ်မဲကြီးတစ်ခု လှုပ်ရှားနေသည် ဟု … ။
ထိုသတင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်သဖွယ်ပျံ့နှံ့သွားပြီးလျှင် သတ္တိကောင်:သူများပင် ကျောထဲစိမ့်သွားကြရသည် ။
လူလော မိစ္ဆာလော နာနာဘာဝလော ?????
တချို့က နှူးဘာဂိုဏ်းကို လက်ညှိုးထိုးကြသည် ။
ဤတွင် “ဗိတိန်ကျွန်းသခင်မကြီး” မှာ “နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ် သမိန်ဂီ” ကို ခေါ်တွေ့လေတော့သည် ။
“” ဟဲ့ ငဂီ ဒါနင့်လက်ချက်မဟုတ်လား ညညမူးပြီးဗွက်အိုင်ထဲချော်လဲ ၊ ပြီးတော့မှ ကောင်မလေးတွေအိမ်ထဲ လက်ဆေးဖို့ခိုးဝင်တယ် ဟုတ် “”
“” ဒေါ်ကြီး မြစာလေးရယ် ကျော် ဘာမှမလုပ်ပါလားဗျာ ……
ကျော်အခု နှူးဘာလက်ညှိုးသွေးကြောထိုး သိုင်းကို လေ့ကျင့်နေတယ်ညှော် ……
ကျော် ဘာမှတ်ိဘူးးး “”
တရားခံမှာ မည်သူမှန်းမသိဖြစ်နေရလေသည် ။
အဖြစ်မှန်မှာ ကြောင်ဏှာသီးတစ်ယောက် ရွာပြန်ရောက်ပြီး ဟိုချောင်း ဒီချောင်းလုပ်နေခြင်းပင် ။
ညသန်းကောင်ဘောပွဲ မအိပ်ဘဲကြည့်လေ့ရှိသော “ဘောမင်းသမီး မိုက်လုသော်” မှ အောင်ကြူးကို တွေ့ရှိသွားခြင်းဖြစ်လေသည် ။
သွေးသောက်ညီအစ်မဖွဲ့ထားသော “ကျီးလက်သဲ ကြည်တိုးရွှေ” နှင့် အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖမ်းဆီးပါသော်လည်း သိုင်းစွမ်းရည်မြင့်မားလွန်းသော “အန်ကျော့လော်အောင်ကြူး” ကို ဖမ်းမမိခဲ့ချေ ။
“နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်ဂီ” တစ်ယောက်ပေါက်ကွဲနေလေတော့သည် ။
“” တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ကြောင်ဏှာသီးရယ် ခီညားဂို အရည်ဆုတ်မဲ“””
ယခင်က ဂိုဏ်းတူမောင်နှမဖြစ်သော “ဘာကာခုနှစ်လွှာဓါးသမား ဇာယိခိုင်” မှလည်း ကြောင်ဏှာသီးကို စစ်ကျေညာခဲ့သည်။
အကြောင်းမှာ အောင်ကြူးမှ “စေတနာရှင်မယ်တော်ကြီးစု” ကို အသရေပျက်ရာပျက်ကြောင်း ဝေဖန်လေပုတ်ထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်လေတော့သည် ။
မယ်တော်ကြီးစုကို ကြည်ညိုလှသော “ဗိတိန်သခင်မကြီး” မှာလည်း အောင်ကြူးကို “နားဦးတည့်ရာသိုင်းကွန်ခြာ သိုင်းကွက်” ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် စိုင်းပြင်းနေလေပြီ ။
အောင်ကြူးတစ်ယောက် ရန်သုဝိုင်းဝိုင်းလည်လေပြီ ။
အောင်ကြူးဖက်မှ မည်သူရပ်တည်မည်နည်း ။
“ရွာသဂျီး လူကွေ့ရှောင်” ကိုယ်တိုင်အောင်ကြူးအား မထောက်ခံတော့ပေ .။
မကြာမှီကာလအတွင်း ဂဇက်ကျေးရွာအတွင်းဝယ် ပြင်းထန်သော တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်မှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပေ ။
ကာလအတန်ကြာပျောက်ကွယ်နေသော “အရှေ့ကျွန်းသခင်ကြီး ကျောက်စ်မိန်ယူ” သည်လည်း နှစ်တစ်ရာလင်းယုန်ငှက်ကြီးစီးပြီး ရွာသို့ပြန်ရောက်လာခဲ့သည် ။
တကယ်တော့ ကျောက်စ်မိန်ယူမှာ “”မီးရှူးသန့်စင် မျက်နှာမြင် “” သိုင်းကို ဂူအောင်းလေ့ကျင့်နေချိန်ဖြစ်လေသည် ။
မိတ်ဆွေရင်းဖြစ်သူ “ကျိယွင်မတ်” မှသတင်းပေးသဖြင့် ကြောင်ဏှာသီးကို သုတ်သင်ရင် ပြန်လာခြင်းပင် ။
အောင်ကြူးတစ်ယောက် ပြေးစရာမြေရှိပါဦးမည်လား ဆိုသည်ကိုတော့ …………
အသံကြားယုံဖြင့် အော်ဂလီဆန်စရာဖြစ်သည် ။
သို့သော် ခေတ်စံနစ်တို့အပြောင်းတွင် သင်းချိုင်းမြေသည်လည်း အထပ်မြင့်ကွန်ဒိုများ စီးပွါးရေးဇုံများဖြစ်လာကြသဖြင့် သင်းချိုင်းမြေသည် ရွှေထုတ်သည့်မြပဝါဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် သင်းချိုင်းမြေသည် သုဘရာဇာများသာမက သူဌေးသူကြွယ်များဖြင့်စည်ကားနေလေတော့သည် ။
သို့သော် ဂဇက်ကျေးရွာသင်းချိုင်းသည်ကား ရွှေခေတ်သို့မရောက်သေးပါ ။
သုဘရာဇာတစ်ဦးသာ အေးအေးလူလူ ရှိနေပါသေးသည် ။
ထိုသုဘရာဇာကိုလည်း မည်သူမျှ ခင်မင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုကြပါ ။
လူသေများမြှုတ်နှံခြင်းဖြင့်သာ မွေ့လျော်နေပေတော့သည် ။
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ည ……
တစ်ခြမ်းပဲ့လ၏ ခတ်မှုန်မှုန်အောက်တွင် လူတစ်ယောက်လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည် ။
ထိုသူသည် နောက်ဆုံးအလောင်းတစ်လောင်းအားမြေမြှုတ်အပြီး နားရွက်ကြားမှ ဆေးပေါ့လိတ်တိုကိုမီးညှိရှိုက်ဖွာလျှက် …………
“” အင်းးး ဘာလိုလိုနဲ့ တာဝန်တစ်ခုတော့ပြီးပြန်ပေါ့လေ …… အသက်တစ်ရာမနေရ အမှုတစ်ရာမွှေရ “”
အထက်ပါအတိုင်း ရေရွတ်ငြီးတွားရင်း ဇရပ်ပျက်ဆီသို့ လေးတွဲ့သောခြေလှမ်းများဖြင့် လျောက်လာခဲ့လေသည် ။
ထိုသူသည် ဂဇက်ကျေးရွာကျူးသင်းချိုင်းမှ သင်းချိုင်းစောင့်ကြီးသာဖြစ်လေသည် ။
ထိုသူ၏နောက်ကြောင်းရာဇဝင်အား သင်သိမည်ဆိုပါက သူ့ထံသို့အလောင်းအပ်နှံ၍မြှုတ်ခိုင်းဝံ့မည်မဟုတ်ပါ ။
ထိုသုသည် မည်သို့သောသူဖြစ်သနည်းးး ???¿¿¿¿
တချိန်က အွန်းသိုင်းလောကတွင် “သုဘရာဇာသိုင်းသမားသောင်ချမ်း” ဟူ၍ ရှိခဲ့ဖူးလေသည် ။
ထိုသူသည် တိုက်ခိုက်လိုသောသူထံသို့ အနက်ရောင်အခေါင်းကြီးအားပို့လိုက်ပြီးလျှင် ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ လာရောက်တိုက်ခိုက်လေ့ရှိတတ်သည် ။
သို့သော် လွန်ခဲ့သော နှစ်ကာလအတန်ကြာကတည်းက အွန်သိုင်းလောက၌ အနားယူသွားပြီးလျှင် ဇတ်မြှုတ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေသည် ။
သင်းချိုင်မြေအနီးမှ လူရိပ် နှစ်ရိပ်ပြေးလွှားသွားသည်ကို သုဘရာဇာကြီးမှမြင်လိုက်သည် ။
ဖုန်းဆိုးမြေတွင် အရိပ်သဏ္ဍန်မှာမထူးခြားပါ ။
သို့သော် ယခုလူရိပ်သည် သုဘရာဇာအတွက် ကြက်သီးများပင်ထသွားစေလေသည် ။
မည်သူနည်းးး ????
“သေလည်ကြောင်ဂိုဏ်းက လက်ဝဲရံပါလား ….!!!!!!!
အင်းးးး လက်ဝဲရံရောက်ပြီဆိုရင်တော့ လက်ယာရံလည်း ရောက်လာတော့မှာပေါ့ ……
ဒါဆို သေလည်ကြောင်ဂိုဏ်းက မင်းလေးပါးပြန်စုံကြပြီဘဲ ။
ပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့တွေ့ရဦးမှာပေါ့လေ …… “””
“” ဟင်င်င် …… နောက်တစ်ယောက်က ဘယ်သူပါလိမ့် ??
အော် …… “လူထူးဆန်းအဖိုးအို ထန်စူး” ဖြစ်နေပါလား ……
ကောင်းးးကွာ တကယ့်ကို ပွဲကြီးပွဲကောင်းဘဲဟေ့ …
ဧကန္တတော့ … မဟုတ်မှလွဲရော…. “လေမင်းသခင်ကြောင်ဏှာသီး” ကို လာပြီးကူတိုက်ပေးတာဖြစ်မယ် ……
အင်းးး ငါလည်းဒီလောက ကအနားယူခဲ့ပြီဆိုတော့ ဘေးကပဲပွဲကြည့်ပရိပ်သတ်လုပ်တာဘဲကောင်းပါတယ်လေ ……
လိုရမယ်ရ ၆ပေ ၂ပေ ၃ပေ အနက်ကျင်းလေး သုံးလေးကျင်းလောက်တော့ တူးထားဦးမှ ……… “””
အထက်ပါအတိုင်း တီးတိုးရေရွတ်ပြီးလျှင် သုဘရာဇာကြီးမှာ ဆေးပေါ့လိပ်တိုအား ဇရပ်အုပ်ခုံပေါ်သို့ ထိုးချေမီးသတ်လိုက်လေတော့သတည်းးး
ကျန်နေတဲ့ စာရွက်လေးတွေ ဆက်မဖတ်နိုင်သေး ပဲ စဉ်းစားခန်းဝင်နေမိသည်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဂလောက် လူစုံဝိုင်းသတ်တာတောင် မသေရင်တော့ ဒီကြောင်ဏှာရီး.. သွေးဆေး နဲ့ ဖျာရောင်းပြီး အဟွာဖြတ်ပစ်မယ်.. (အမြီး)
ခင်ဇော် says: သူ့ အား က အမြီးမှာတဲ့
မြစပဲရိုး says: ကိုယ်တုံးလုံး လေသိုင်း ကျင့်တာ ဆိုတော့ အဲ့ အမြီး ကြီး က အတော်လေး အဟွာ ဖြစ်နေမှာ ဘဲ။
အပိုင်း(၃) ကို ပြေးပြီ။
Alinsett@Maung Thura says: အပြေးအလွှား လာဖတ်တာ
သိုင်းဝစ်ထုတွေများ တယ်လည်း စွဲသကိုးးး
နာမည်တွေကော သိုင်းကွက်အမည်တွေကော ဖတ်ပြီး တခွိခွိ ရီနေရ
အဲ ဒါ ဒါ
ခင်ဇော် says: ရေးတဲ့ သူ တော် တာ တော့ မပြောနဲ့တော့။
Mr. MarGa says: ကိုင်းးးး
ပွဲကတော့ လှ ပဟ
ခင်ဇော် says: မင်းသား မလာသေးတော့ တိုက်ပွဲ စရ ခက်နေပြီ
naywoon ni says: ခုမှပဲ လက်​သည်​​ပေါ်​တော့တယ်​ ။ မြန်​တျာန့်​ စာ​ပေ​လောကမှာ ​နောက်​ကွယ်​က​နေ ​သိုင်းဝတ်​ထု ​တွေ ဘာသာပျံ ဆိုပြီး ရွှီး​ပေး​နေတဲ့ ချဲဒိုး စာ​ယေးဆြာ မိဘီ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12373
ခင်ဇော် says: သိုင်း ဝတ္ထု ဖတ်သက် တစ်လျှောက် ဒီလောက် ရေးတတ်တာ မတွေ့ဖူးဘူးးး
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟိုးဆယ်တန်းဖြေပီးတုန်းက ဆယ့်သုံးတွဲ ဆယ့်ငါးတွဲသိုင်းတွေတောင် ဒီသိုင်းဝတ်ထုလောက်မရီရ အဲ့မွှားလို့ ဒီသိုင်းစာအုပ်လောက်မကောင်းဘူး။ ခုကတော့ နှစ်တထောင်ကြောင်ကိုဘယ်လိုသုတ်သင်မလဲစိတ်ဝင်စားချက်။ နာမယ်ဒေဖော်ရတာလဲပျော်ဇရာ။ အဲ့ သောင်ချမ်းတယောက်ပဲမသိဘူးရယ်။ ရီလိုက်ရတာလဲမျက်ရည်မျက်ခွက်
သုဘရာဇာ သံချောင်း ပေါ့။
မွသဲ ( 17082011 ) says: အား ဒီလိုလား။ အဟိ မနေ့ကတဲကစဉ်းစားနေတာ စဉ်းစားမြ
Wow says: နာလိုပဲ သိုင်းဝုတ်ထုဒွေ အတော်ဖတ်ထားပုံရဒယ်… အကွက်ကိုစေ့ပီး ဖတ်ကောင်းချက်များ….
ဒါနဲ့ “သုဘရာဇာသိုင်းသမားသောင်ချမ်း” ဆိုတာဘူလဲဟင်..
ခင်ဇော် says: မွသဲ ကို ဖြေပေးထားတယ်လေ။
Wow says: ဟီးးးးး ပြန်ဖတ်တော့လဲ ရီရတာပဲ…
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ်မိန်ယူလည်း ” မီးရှူးသန့်စင် မျက်နှာမြင် ” သိုင်းကိုမကျင့်ရသေးခင်…
“ဗိုက်စ် ဆီလိမ်းပေး အကြောမပြတ်ရေး” အကွက်နဲ့ အတွင်းအားကျင့်နေရတာ…
လက်ဖဝါးက လက္ခဏာအရေးအကြောင်းတွေတောင် ပျောက်တော့မယ်… အဟိ
ခင်ဇော် says: ဟီးဟီးဟီးးး
Mike says: .”ဗိတိန်သခင်မကြီး” မှာလည်း အောင်ကြူးကို “နားဦးတည့်ရာသိုင်းကွန်ခြာ သိုင်းကွက်” ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် .စိုင်းပြင်းနေလေပြီ ။
.”အရှေ့ကျွန်းသခင်ကြီး ကျောက်စ်မိန်ယူ” “”မီးရှူးသန့်စင် မျက်နှာမြင် “” သိုင်းကို .ဂူအောင်းလေ့ကျင့်နေချိန်ဖြစ်လေသည် .ခွိခွိခိခိ …..သိုင်းကွက်တွေကကောင်းမှကောင်းပါလား မဇာယိ ရဲ့ …အဟွတ်…တယ်..ဒီခြောင်း .
ခင်ဇော် says: တညား က
စာအုပ်ထဲက ပါတာ ရေးပြတာကို။
တိုက်ဆိုင်လို့ ရွာထဲ လာပြတာ။
black chaw says: သိုင်းလောက ဆိုတာ
သိတ် ကြောက်စရာ ကောင်းပါလား…။
ခင်ဇော် says: သိုင်းလောကတော့ ဆက်ဆီမကျဘူးကွဲ့
တိမ်မည်း says: ကျန်းဝူကျိ ကား ကို သတိရထှာ
ခင်ဇော် says: သူ့ကို အင်မတန်ကြိုက်တာ။
တိုနီလျောင် ရိုက်တဲ့ နဂါးနိုင်ဓားဇာတ်လမ်းတွဲကိုအကြိုက်ဆုံးး
Ma Ma says: သိုင်းဝတ္ထုတွေ ဘယ်လောက်များ ဖတ်ထားသလဲ မသိဘူး။
စု တု ပြု အစဉ်မှာ ………..
စု ထား တု ထား တာတွေ ပြည့်စုံလို့
ပြု ထားတဲ့ဝတ္ထုက တထိုင်ထဲ လက်ကမချ ဖတ်ဖြစ်အောင်ကို ကောင်းတယ်။ သိုင်းဝတ္ထုရေးချင်တဲ့သူတွေကို သင်တန်းပေးလို့ရပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မောင်နှင်းဆွေတို့လောက်က ပျင်းတယ် ဆိုတဲ့ မြေလျှောက်ဝိတ်ဆာသိုင်းရာဇာ